A Successfull Fudraising Effort to Support OLA/WBO | GadaaTube
A Successfull Fudraising Effort to Support OLA/WBO
Tags/Credits: Radio Afuura Biyyaa
Radio Afuura Biyyaa: Interview with poet/novelist Abraham T. Gudina (Part 2)
Credits/Tags: Radio Afuura Biyyaa
One Response to "A Successfull Fudraising Effort to Support OLA/WBO"
Obsa Injifata July 5, 2013 at 11:08 pm
ABO’n badeera iddoo shanitti walqoodeera jedhanii warri odeessaa turan firris halagaanis kana haalaalani. ABO’n gonkumaa hinbaduu;yaroo tokko jabacchuu yaroo tokko laafuu taati malee. Tokkummaan oromoota amma deebi’ee ijaaramaa jira. Woyyaaneen gama tokkoon Ginboot 7 gama biraan Oromoo walittibuusuuf haahojjetanuu malee hinmilkaa’an. Mee hojii ESAT fi Ginbot 7 oromoorratti hojjetan ilaalaa. Waa’ee OSFNA hingabaasan. Waa’ee ABO Daud hingaabasan. Waa’ee OSA hingabaasan. Waa’ee OPDO fi waa’ee ABO Kamal Galchuu garuu baay’ee dubbatu. Kun kan mul’isu dhaaba oromoon ofiif ijaarrattuuf beekumsa hinkennan;kan isaan nuuf ijaaraniif malee.